5 Waxyaabood oo aad uga muhiimsan Lacagta - Aayaha
Waxaa jira waxyaabo ka muhiimsan lacagta kana horeeya oo loo baahanyahay inaad siiso mudnaanta koowaad.
Hoos ka aqriso dhamaan waxyaabaha ka muhiimsan lacagta.
Qoyskaaga waa mid aad kaaga muhiimsan lacagta. Lacagta ma bedeli karto xiriirka diiran ee laga helo qoyskaaga. Xittaa marka ay lacagta kaa baxdo ama kaa dhamaato, qoyskaaga waad heysataa marka maxay tahay sababta aad lacag uga sareeysiineyso qoyskaaga? Qoyskaaga waa kan sida dhabta ah uu kuu jecel oo aanan kaaga tegi doonin xaalad walba sidaa darted marnaba lacag haka hormarin qoyskaaga.
Waxaa jira dad badan oo ku nool dunida oo aanan farxad heysan manta kuwaas oo doonaya inay farxad helaan. Haddii aad heshay farxad, waa inaad barataa sida loo qiimeeyo. Lacag ma kaa dhigi doonto qofka ugu farxada badan aduunka, waa inaad ogaataa taas. Waxaa jira dad badan oo hodan ah oo aan farxad heysan.
Lacag kuma siin karto caruur marka maxay tahay sababta aad u qiimeyso lacagta oo aad uga sara marineyso caruurtaada? Waxaa jira dad farabadan oo lacag heysta balse aanan caruur heysan, sidaa darted waa inaad mudnaanta siisaa caruurtaa isla markaana aadan siin qiimaha aad siiso caruurtaada kabadan.
Waqti usameey caruurtaada si aad farxada ula qeybsato , haka mashquulin caruurtaada.
“Caafimaadka waa hanti” Lacag kuma siin karto caafimaad dhameystiran ilaahay “SWT” ayaa bixiya caafimaadka sidaa darted maxaadan u qaadan fasax oo aadan ula socon caafimaadkaaga maanta. Caafimaadkaaga ayaa ka horeeya lacagta.
Helitaanka saaxiib dhab ah ma fududa sidaa dateed markaad hesho qiimeey, aad ayay uga qiima badanyihiin lacagta.
Saaxiibada dhabta ah waxay ku dareensiiyaan farxad iyagoona garab kuu noqda, marka saaxiibada wanaagsan ayaa ka horeeya lacag.
Waxyaabahan waa kuwa ka muhiimsan lacagta, waa waqtigii aad siin lahayd mudnaanta.